अम्बे स्टिलसँग काठमाडौंका मेयरको सेटिङ : सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै गैरकानुनी होर्डिङ बोर्ड ! | Diyopost
अम्बे स्टिलसँग काठमाडौंका मेयरको सेटिङ : सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै गैरकानुनी होर्डिङ बोर्ड !
काठमाडौं, १४ फागुन । ०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओम प्रकाश श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले काठमाडौं महानगर भित्र होर्डिङ बोर्ड राख्न निषेध गर्ने फैसला सुनायो ।
महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक होडिङ बोर्डहरु, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो । तर, ३ वर्ष वितिसक्दा अर्थात २०७६ सालमा पनि होर्डिङ बोर्ड हटाउन महानगरपालिका असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य र गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादललाई अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको आदेश दिएपछि त्यतिबेला छिफूट रुपमा होर्डिङ बोर्ड हटाइएको पनि थियो ।
२०७६ मंसिर २७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन निर्देशनालयले ७ दिन भित्र होर्डिङ बोर्ड हटाएर त्सयको रिपोर्ट समेत पेश गर्न भन्दै कडा आदेश दिएको थियो । सोही आदेशपछि महानगरले होर्डिङ बोर्ड हटाएको पनि थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै काठमाडौं महानगरमा फेरी होर्डिङ बोर्डको बिगबिगी देखिन थालेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यकै मिलेमतोमा ठूला माफिया व्यापारीको सेटिङमा महानगरकै कार्यालय छुउछाउ नै होर्डिङ बोर्डका विगविगी बढेको स्रोतले जनाएको छ ।
महानगरको गेट नजिकै रहेको सुन्धारा, रत्नपार्क, जमल लगायत आकाशे पुलमा मनोमानी रुपमा होर्डिङ बोर्ड राखिएको भएपनि महानगरले देखेनदेखे गरिरहेको छ ।
महानगर छेउमै रहेको आकाशे पुलमा अम्बे समुहको लागानी रहेको अम्बे स्टिलको ठूलो होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ । अधिकांश आकाशे पुलमा अम्बे स्टिलको होर्डिङ बोर्डले भरिएको छ । तर, सरोकारवाला निकाय भने मौन छन् । अम्बे स्टिलका मालिक विष्णु न्यौपानेसँगको आर्थिक सेटिङमा महानगरका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले सबै आकाशे पुलमा होर्डिङ टंग्याएको स्रोतले जनाएको छ । महानगरका उच्च अधिकारीहरुले कमिशनकै लोभमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लत्याएको एक कर्मचारीले बताए ।
काठमाडौंको थापाथली, सुन्धारा, जमल बानेश्वर लगायत क्षेत्रमा ठूला होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ ।
काठमाडौं महानगरमा सार्वजनिक क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाउने नितिगत व्यवस्था नै भएपनि महानगरले आफैले बनाएको नीतिको धज्जी उडाएको छ ।
अहिले पनि काठमाडौंको थापाथली, माइतिघर, त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर लगायतका मूख्य चोककै छेउछाउमा ठूला–ठूला बोर्ड राखिएका छन् । स्रोतका अनुसार महानगरका अधिकारीबाटै त्यस्ता बोर्डहरुको संरक्षण गरिएको छ । उनीहरुले कमिसन लिएर बोर्ड राख्न दिएकाले त्यसलाई हटाउन नसकेको स्रोतको दावी छ ।
महानगरमा गैरकानुनी होर्डिङ बोडएको बिगबिगी भएको विषयमा प्रतिक्रिया लिनका लागि मेयर विद्या सुन्दर शाक्यको मोबाइल नम्बर ९८५१२७९९०० मा पटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् । त्यस्तै प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलको नम्बरमा फोन गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् ।